आखिर को रहेछ, भागरथीको हत्यारा ? प्रहरी नजिक पुग्यो ! « Ok Janata Newsportal
आखिर को रहेछ, भागरथीको हत्यारा ? प्रहरी नजिक पुग्यो !
काठमाडौं । बैतडीकी किशोरी भागरथी भट्टको हत्या प्रकरणमा प्रहरीले १० दिन बितिसक्दा पनि हत्यारा पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै नागरिकहरु सडकमा ओर्लिएका छन् । एक नारीमाथि निरन्तर बलात्कारपछि हत्या प्रकरणले आजित बनेका नागरिकहरुले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को कार्यशैलीमा पनि प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
डिआइजी लागे बैतडी : भगिरथी घटनामा यस्तो रहस्य खुल्यो !
अहिले बैतडीमा नागरिक समाजका अगुवा, प्रहरीका डिआइजी, मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार लगायतको भिड बढेको छ । प्रहरीले अनुसन्धानलाई पनि तीब्र पारेको छ । अहिलेसम्म प्रहरीलाई सोचेजति सफलता हात पर्न सकेको छैन । यद्यपि प्रहरीले भने भागरथीको हत्यारा नजिक आफूहरु पुगिसकेको दाबी गरेको छ ।
बैतडीको भागरथी घटनाका अहिलेसम्मकै रहस्यमय तस्बिर (८ तस्बिर)
माघ महिनाको अन्तिम साताको बुधबार विद्यालयबाट घर फर्केकी किशोरी बिहीबार चडेपानीमा मृत फेला परेकी थिइन् । घटनास्थल हेर्दा सडक भन्दा थोरै तल मात्रै देखिन्छ । ५० मिटर यता आइसकेपछि गाउँको पहिलो घर आउँछ तर, उनको रहस्यमय ढंगले हत्या भएको छ । भागरथीकै बारेमा नजिकबाट बुझेको र सधैँ नियालीरहेको व्यक्तिले बलात्कार पछि हत्या गरेको हुनसक्ने आशंका प्रहरीको छ ।
बलात्कार एकल की सामूहिक भन्ने पत्ता लगाउन भागरथीको भेजाइनल स्वाब प्रहरी विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको छ । उनको डिएनए पनि परीक्षण गरिनेछ । भागरथीको शवको स्थिति हेर्दा बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि भइसकेको थियो । उनको शरिरमा नंग्रा तलको वस्त्र च्यातिएको अवस्थामा फेला परेको थियो ।
सुदूरपश्चिममा निरन्तर बलात्कार, अपराधी खोई ?
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका उल्टाखामकी निर्मला पन्तको पनि बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउन भन्दै नागरिक समाजले दबाब पनि दियो । तर, घटनाले राजनीतिक मोड लिँदा बिना कसुर प्रहरी निलम्बनमा परे, निर्दोष धेरै प्रहरी हिरासतमा बस्नुपर्यो ।
यतिमात्र होइन तत्कालीन एसपी दिल्लीराज विष्टका बुवा छोराकै डिएनए परीक्षण गर्न लगाइयो । उनलाई सामाजिक रुपमा बहिस्कार जस्तै पारियो तर, पनि हत्या अझै खुलेआम घुमिरहेको छ । आखिर को हो त निर्मालाको हत्यारा ? उनै गृहमन्त्री आज पनि पदमा बहाल छन, उनलाई यति पनि लाज छैन आफूले निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउन नसकेकोमा । अझै भन्दैछन् भागरथीको केस निर्मलाको जस्तो होइन ।
सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख डिआइजी उत्तमराज सुवेदी यतिबेला बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिमा चडेपानीमा डेरा जमाएर बसेका छन् । उनी हत्यारा पत्ता लगाएर मात्रै फर्किने तयारीमा छन् । यद्यपि उनी अगावै फर्किए पनि नाजवाफ बन्नेछन् ।
प्रहरीका अनुसार अहिले क्लोज रिङबाट अनुसन्धान भइरहेको छ । भागरथीको मोबाइल र अन्य क्लूमार्फत् प्रहरीले अनुसन्धानलाई साँघुरो पारेको बताएको छ । भारतीय प्रहरीको पनि नेपाल प्रहरीले साथ मागेको छ ।
नेकपा विरोधसभा : वक्ताको लिस्टमा किन अटाएनन् भीम रावल ?
अहिले भागरथीको शव अस्पतालमा राखिएको छ । लामो समय भइसक्दा पनि आफन्तले शव बुझ्न मानेका छैनन् ।